Dowladda Federaalka oo qiil u raadisay go’aankii Maraykanku ku jaray taageerada uu siin jirey ciidanka XDS • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dowladda Federaalka oo qiil u raadisay go’aankii Maraykanku ku jaray taageerada uu siin jirey ciidanka XDS
Dowladda Federaalka oo qiil u raadisay go’aankii Maraykanku ku jaray taageerada uu siin jirey ciidanka XDS
December 16, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda gaashaandhiiga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in u socdo barnamij ama daraasad lagu hubinaayo tirada ciidamada iyo bixinta mushaaraadka, sidaas darteedna Dowladda Soomaaliya iyo Maraykanku isla qaateen in la hakiyo tageerada Maraykanku bixin jirey, war saxaafadeedka ayaa ymid kadib markii wakaalada reuters ay heshey dukuminti caddeynaya in Maraykanku jare taageeradii uu sin jirey ciidanka, Maraykanka ayaa sheegay in la musuqmasuqo taageerada ay bixiyaan, taas oo aanw axba ka tareyn la dagaalanka argagixsada.
Dowaldda federaalka ayaa hadda sheegaysa in ay Maraykanka go’aanka isla qaateen sabab jirta awgeed-
Hoos ka eeg War-saxaafadeedka oo sidiisi ah
Dowladda Federaalka oo xoojineysa isla-xisaabtanka ciidanka XDS
WAR-SAXAAFADEED (Faafin Degdeg Ah)
Muqdisho, 15 December 2017 – Dowladda Federaalka Soomaaliya, oo in muddo ah waday isla xisaabtanka hay’adaha Dowladda si loola dagaallamo musuqmaasuqa, ayaa bilowday daraasad lagu hubinaayo tirada ciidamada iyo bixinta mushaaraadka si ciidanka loogu dhiirrigeliyo dagaalka lagula jiro kooxaha aragaxisada ah.
Maadaama ay socoto daraasad lagu qiimeynayo awooda ciidanka (Operational Readiness Assessment) ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Mareykanka waxa ay isla garteen in muddo kooban la hakiyo taageerada cutubyo ka tirsan ciidanka XDS si dib u qaabayn loogu sameeyo gargaarka amniga.
Hakinta waxa ay salka ku haysaa keddib markii ay Dowladda Mareykanka soo dirtay guddi baaris ku sameeya meelaha lagu bixiyo kaalmada Mareykanku siiyo ciidamada bishii May ee sanadkan si dib u habeyn loogu sameeyo hannaanka loo caawiyo ciidamada iyo in la xaqiijiyo in kaalmada loogu talagalay ciidamadeenna ay gaaraan meelaha loo qoondeeyay. Guddigaas waxa ay daba socdeen in ay xaqiijiyaan sidii loo isticmaalay kaalmadii ay Mareykanu bixiyeen dhawrkii sano ee u dambeysay.
Markii uu Barlamaanku ansixiyay Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre bishii Abriil ee sanadkan, waxaan albaabada u furnay saaxiibada naga taageera arrimaha ciidamada si aan u abuurno nidaam ku dhisan daahfurnaan iyo isla xisaabtan.
Iyada oo taasi laga duulayo, waxa ay Dowladda Federaalka Soomaaliya sameysay guddi baaritaan kusoo sameeya tirada iyo tayada ciidamada Milatariga iyo Booliiska, meelaha ay kala joogaan iyo qalabka ay haystaan.
Hakintan wax saameyn ah kuma laha heshiiskii ay labada dhinac kala saxiixdeen 5tii bishan iyo taageerada ay Dowladda Mareykanku ku bixiso cutubyada sida gaarka ah u tababaran ee Ciidamada XDS.
Waxaa xusid mudan in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay bilowday in ciidamadeenna lagu diiwaangeliyo qaab electronic ah oo ka hortagaya in la musuqmaasuqo mushaaraadka ciidamada, laguna xaqiijinayo tirada iyo tayada ciidanka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’an in dib-u-habeyn dhab ah lagu sameeyo ciidamada iyo hay’adaha maaliyadda, lana xoojiyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka.
Waxaan u mahadcelinaynaa Dowladdda Mareykanka iyo Dowladaha kale ee aan saaxiibka nahay taageerada joogtada ah ee ay la garab taaganyihiin Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay ugu dambeysay heshiisyadii labo dhinaclaha ahaa ee aan wada saxiixannay toddobaayadii lasoo dhaafay.
Sidoo kale, waxaan soo dhaweynaynaa warbixintii Sanduuqa Lacagta Adduunka uu sii daayay toddobaadkii hore kaas oo lagu sheegay in Dowladda Federaalka ah ku guuleysatay qorshihii ay sanadkan ku heshiiyeen hay’adda IMF kaas oo muujinaya in lagu kalsoonyahay hay’adaha maaliyadda dalka.
Shacabka Garowe “Shirka Madaxda Maamul Goboleedyadu wuxuu hagardaamo ku yahay helitaanka Dowlad Dhexe”(Dhagayso).
October 21, 2018 By Mohamed Dahir
Wasaarada Dastuurka iyo hay’adaha ka shaqeeya waxbarashada madaniga oo heshiis kala saxiixday
October 21, 2018 By Abdirisak Faamoos
Dahir Ciiro“Shirka Garowe uga furmay maamulada waa mid lagu majaxaabinayo masiirka Umadda-Dhageyso
Madaxweynaha Jubbaland oo si adag uga hadley doorashada Soomaaliya ee 2020.
October 21, 2018 By HORSEED STAFF